လာမည့် Xiaomi Mi Note2၏ပုံများ | Androidsis
လာမည့် Xiaomi Mi Note2၏ပုံများပေါက်ကြားသွားပြီဖြစ်သည်
Alexis Martinez | | Xiaomi က
ယခုအချိန်တွင် Xiaomi သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းခန့်မှန်းမှုအရှိဆုံးတရုတ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ Xiaomi သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အရောင်းရဆုံးနေရာတွင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးအခြားအကြီးစားထုတ်လုပ်သူများနှင့် Samsung, Apple, Sony စသည့်ကဏ္sectorမှ ၀ န်ထမ်းများအားနေရာရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့သည်။
Xiaomi သည် ၂၀၁၆ အတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။ ထုတ်လုပ်သူသည်ယခုနှစ်အစတွင်ပစ္စည်းအသစ်များဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုသည်ကျော်ကြားသောတရုတ်လူမှုကွန်ယက်ဖြစ်သော Weibo တွင်ပုံများအဖြစ်ပေါက်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပြန်ဆိုထားသောပုံများတွင်နောက်ထုတ်လုပ်မည့်တရုတ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့်နောက်သဲလွန်စအချို့ကိုသင်တွေ့နိုင်သည် Xiaomi က Mi Note 2.
အကယ်၍ ပြန်ဆိုချက်သည်အနာဂတ်စက်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါက၎င်း၏ရှေ့ဖက်နှစ်ဖက်တွင်အလွန်ပါးလွှာသောဘောင်များပါရှိသည့် terminal တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ စမတ်ဖုန်း၏နောက်ကျောနှင့် ပတ်သက်၍၊ လက်ဗွေဖတ်စက် နှင့် ကင်မရာနှစ်ခု LED flash ကိုအတူ။
အနာဂတ် Xiaomi terminal ၏ဤပထမဆုံးပုံရိပ်အပြင်စက်နှင့်ပတ်သက်သည့်ပထမဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များလည်းပေါက်ကြားခဲ့သည်။ အားလုံးကောင်းသွားရင် Mi Note2မှာa၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် QHD resolution ဖြင့်အတူ။ အတွင်းပိုင်းတွင် Processor တစ်ခုပါရှိမည် Snapdragon 820 နောက် RAM memory4GB ။ ၎င်း၏ဓာတ်ပုံအပိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းကင်မရာနှစ်လုံးမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် ၅ megapixels ရှေ့ကင်မရာတွင် 12 MP အာရုံခံကိရိယာရှိသည် ၎င်း၏သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 32 GB နှင့် 64 GB ဖြစ်ပြီး 3.500 mAh ဘက်ထရီ.
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာပြောနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ပဟေpိ၏အပိုင်းအစများကိုအတူတကွထားရန်၎င်းတွင်ပိုမိုယိုစိမ့်မှုများကိုမြင်တွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » လာမည့် Xiaomi Mi Note2၏ပုံများပေါက်ကြားသွားပြီဖြစ်သည်
အိမ်ထဲရှိကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်း ၇ ခု
Nexus Protect: Google ကသူ့ရဲ့ Nexus အတွက်အာမခံအစီအစဉ်ကိုစတင်နိုင်ပါပြီ